Libanona: Firenena Latsaka An-katerena..Na Tsia · Global Voices teny Malagasy
Libanona: Firenena Latsaka An-katerena..Na Tsia
Voadika ny 19 Jona 2017 16:20 GMT
Ao anatin'ny korontana ara-politika i Libanona rehefa tsy nahavita nifidy ny mpandimby ny filoha Emile Lahoud ny parlemanta androany.
Ora maro talohan'ny fiafaran'ny fe-potoam-piasany, nandidy ny tafika i Lahoud mba hisahana ny fiarovana, mamela ireo antoko mpifanandrina ho tompon'andraikitra amin'ny fanendrena filoha ary mitarika antso iraisam-pirenena ho amin'ny fitoniana.
Naneho hevitra avy hatrany ireo bilaogera ao Libanona, M Bashir namaritra ny toe-javatra tahaka izao:
…ka amin'ny ankapobeny, azo fintinina toy izao ny toe-draharaha: anio amin'ny misasakalina, tsy manana filoha i Libanona, nametra-pialàna ny governemanta (izany hoe, tsy notoherina ny fanomezana ny maha ara-drariny azy), nahemotra amin'ny 30 Novambra ny fotoam-pivorian'ny parlemanta hifidy filoha vaovao, ary ny tafika no miandraikitra ny fiarovana ny tany.
Nanazava bebe kokoa ny zava-misy eny ifotony i Mustapha ary nanoratra hoe:
Fanazavana lehibe ho an'ireo mpanara-baovao any ivelany izay manome lanja be loatra ny fanambaran'i Lahhoud.
TSY nanambara firenena latsaka an-katerena na lalàna miaramila ny filoha Libaney ankehitriny. Tahaka izao ny fanambarana nahatonga ny fisavoritahana: “Manalokaloka an'i Libanona ny rahona mitaky ny fahalatsahan'ny firenena an-katerena”.
Ny tena nataon'i M. Lahhoud dia manendry ny tafika mba hisahana ny fiarovana ny tany. Dingana miverimberina noho ny efa nanaovan'ny governemanta Seniora izany.
Na izany aza, maneho ny tsy fahaizany manao zavatra matotra kokoa ny fanambaran'ny ho filoha taloha. Tokony esorina ao an-dohanao avy hatrany ny fampitahana rehetra amin'i Pakistan, Jordania na Ejypta, izay anaovan'ny tafika famoretana mafy amin'ny vahoaka.
Liliane, kosa, manontany raha manaraka ny lalàmpanorenana na tsia ny zava-mitranga ao amin'ny fireneny. Nilaza ihany koa izy fa ity andro ity no “misamboaravoara indrindra” mbola tsy niainan'i Libanona hatramin'izay noho ireto antony manaraka ireto:
1- Mpikambana 109 ao amin'ny Parlemanta, anisan'izany ny mpanohitra, no tonga tao amin'ny parlemanta tamin'ny mitataovovonana.
2- Nahemotra amin'ny 30 Novambra ny fotoam-pivoriana mba hifidianana filoha eken'ny ankolafy rehetra.
3- [Taorian'ny] fanemorana ny fotoam-pivoriana, nifampiresaka tamin'ny alalan'ny haino aman-jery ny depiote
4- Tao anatin'ny fivoriana ny kabinetra [filankevitry ny minisitra] nanomboka tamin'ny 6:30 hariva, miresaka momba ny vaovao farany indrindra
5- Nanambara fahalatsahan'ny ny firenena an-katerena manomboka amin'ny 24 Novambra 2007 ny filoha Emile Lahoud (hatramin'ny 11:59 hariva tamin'ny 23 Novambra 2007)
6- Nolavin'ny Kabinetra izany noho ny lalàmpanorenana, nohazavainy fa anjaran'ny kabinetra izany rehefa lany tao amin'ny parlemanta sy ny sonian'ny maro an'isa ahafahana manambara izany fahalatsahana izany (Tamin'ny 8:30 hariva androany izany)
Blacksmith Jade koa nanazava ny toe-javatra ato.
Araho hatrany ireo vaovao farany avy amin'ny bilaogera ao Libanona.